Ny sarintanin'ny IATA dia manome fetra farany an'ny COVID-19 an'ny mpandeha miaraka amin'ny fanairana amin'ny fotoana tena
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny sarintanin'ny IATA dia manome fetra farany an'ny COVID-19 an'ny mpandeha miaraka amin'ny fanairana amin'ny fotoana tena
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanolotra sarintany an-tserasera fifandraisana maimaimpoana maimaimpoana mba hanomezana ny mpandeha ny farany Covid-19 fitsipika miditra amin'ny firenena. Ny sarintany dia miankina amin'ny tahiry Timata IATA izay misy fampahalalana feno momba ny antontan-taratasy ilaina amin'ny dia iraisam-pirenena. Mba hifanarahana amin'ny toe-draharaha mavitrika momba ny COVID-19, ny Timatic dia havaozina mihoatra ny in-200 isan'andro mba hanomezana fetra fitsangatsanganana marina mifandraika amin'ny areti-mandringana ankehitriny, mifototra amin'ny zom-pirenena sy firenena onenan'izy ireo.
Rehefa miomana ny hamerina amin'ny laoniny soa aman-tsara ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia mila fantatry ny mpandeha izay sisin-tany misokatra ary inona ny fameperana ara-pahasalamana. Ny mpitsangatsangana dia afaka miantehitra amin'i Timatic amin'ny fampahalalana feno sy marina momba ny dia mandritra ny areti-mandringana, '' hoy i Anish Chand, Tale mpanampy an'ny IATA, Timatic.
Tamin'ny fanadihadiana natao vao haingana nataon'ny IATA momba ny ahiahy nananan'ny olona momba ny fitsangatsanganana an-habakabaka aorian'ny krizy, maherin'ny 80% ny mpandeha no nilaza fa miahiahy momba ny fameperana ny quarantine mety ho tratra izy ireo mandritra ny dia. Miaraka amin'ny tsy fahazoana antoka ary manova haingana ny fameperana ny fahasalamana amin'ny firenena iray mankany amin'ny manaraka mandritra ny areti-mandringana, io loharanom-baovao ho an'ny drafitra fitsangatsanganana io dia ara-potoana sy manan-danja.
Manohana ny torolàlana iraisam-pirenena momba ny fiaramanidina sivily (ICAO) izahay mba hampifanarahana ny fepetra hiarovana ny olona mandritra ny diany ary hanome ny fahatokisan-tena hanokatra sisintany tsy misy fepetra arakaraka. Ary ity fanomezana ara-potoana ity dia ho fitaovana lehibe ho an'ireo mpandeha mila fidirana mora amin'ny fampahalalana marina momba ny takiana amin'ny fidirana, "hoy i Chand.
Azo ampiasaina amin'ny finday koa ny sarintanin'ny COVID-19 an'ny IATA. Ny serivisy Timatic COVID-19 Alerts dia natomboka tamin'ity herinandro ity ihany koa mba hanomezana fampandrenesana amin'ny fotoana fohy ho an'ny mpanjifa ny fanavaozana ny dia rehetra mifandraika amin'ny areti-mandringana.